Toerana mendrika tsidihina mba hahazo aingam-panahy hianatra
Home » Vaovao momba ny dia momba ny fanabeazana » Toerana mendrika tsidihina mba hahazo aingam-panahy hianatra
Indraindray, mila mahatsapa aingam-panahy fotsiny ny mpianatra. Mitranga izany rehefa misy demotivé sy tsy liana amin'ny fianarana intsony. Ny mpianatra iray dia mitady sanganasa maimaim-poana amin'ny Internet mba tsy hanaovany asa samirery, ny olona toy izany dia mahafantatra ny fomba hijerena lahatsoratra momba ny fanaovana plagiarism ary mampiasa ny mpanadihady essayy fotsiny aorian'izay mba hampihenana ny index fitoviana, izay azo fantarina aorian'ny fampiasana olon-kafa. taratasy.
Raha ny ao ambadiky ny lohan'ny mpiara-mianatra aminao fotsiny no hitanao isan'andro isan'andro dia mety ho very ny finiavanao hianatra ianao. To aza mientanentana, tokony handinika fitsangatsanganana mampihetsi-po ianao (ary angamba mety haka sary manaitra ny saina indrindra) mandritra ny fotoana lavitry ny fianaranao. Kitiho avy eo ny kitaponao ary miomàna hahazo aingam-panahy amin'ireo toerana tsara tarehy sy mahafinaritra indrindra eto an-tany! F'inona izy ireo? Mamaky hatrany!
Valam-pirenena lehibe Basin
Raha efa te hijery tsara ny kintana ianao, ity no toerana tokony haleha. Ny fijerena ny lanitra feno kintana dia hahatonga ny eritreritrao momba ny fizahana plagiarism amin'ny Internet ho an'ny mpianatra (andramo https://phdessay.com/online-plagiarism-checker//, teny an-dalana) toa iray kilaometatra miala azy. Any Nevada, ny Great Basin National Park dia manolotra làlana misy kintana ary koa festival amin'ny astronomia mahafinaritra. Makà fakantsary tsara ho an'ity iray ity, fa avelao ao an-trano ny jiro miramirana. Tsy mila azy ireo ianao! Amin'ny alina sasany, ho hitanao fa azo atao ny mianatra irery amin'ny kintana. Raha tsy maintsy manao fotoam-pianarana alina be ianao, afaka mieritreritra toerana tsara tarehy kokoa ve ianao?
Angamba ilay valan-javaboary malaza indrindra any Etazonia, Yosemite dia feno fahitana be voninahitra. Any California no misy azy fa izao tontolo izao lavitra ny tanàna lehibe toa an'i San Francisco dia azonao jerena eto ny karazan-javamaniry sy zavamaniry. Na te-handeha hitsangatsangana ianao na te hitoby mandritra ny andro vitsivitsy, dia lavorary ity toerana ity. Ento miaraka aminao ny sasany amin'ireo trano dia izay mampiasa fakan-tsary na raha manana talenta sy faharetana ianao, pensilihazo sy patsa fanaovana sary. Raha tsy mpianatry ny kanto ianao dia mbola afaka mahita aingam-panahy hianatra ao an-tokotany mangina sy milamina.
Alaska dia iray amin'ireo tena ala farany amin'ny kaontinanta amerikana. Eto amin'ny valan-javaboary Denali dia afaka mahita ny biby malaza sasany atolotry Amerika Avaratra ianao. Manomboka amin'ny serfa mahafinaritra ka hatramin'ny moose ka hatramin'ny bera volontsôkôla dia afaka mahita ny biby rehetra tianao ho hita ianao. Ka maninona raha manangona tranolay ary mitondra ny bokinao hanao dia lavitra? Ny rivotra dia mangatsiaka sy mangatsiatsiaka foana, ka mahatonga azy toerana mety hialana amin'ny claustrophobia amin'ny fiainana an-tanàna, indrindra raha avy any amin'ny toetr'andro atsimo ianao. Fampitandremana fotsiny: aza omena sakafo ny biby! “Ny mihinana ny entimodiko ankeriny” dia tsy hanidina any amin'ny ankamaroan'ny efitrano fianarana.
Raha mitady morontsiraka fotsy sy fasika ianao, rano madio mangarahara, ary surf tsara dia tonga amin'ny toerana mety ianao. Rehefa dinihina tokoa, azonao atao ve ny mieritreritra a toerana tsara kokoa hianarana? Raha ny fiainana an-dranomasina sy ny hatsaran'ny ranomasimbe no resahina, tsy misy maharesy ny Saikinosin'i Baja. Na mpitsabo scuba mazoto ianao na te hanandrana snorkeling voalohany indrindra dia ity no toerana tadidinao mandrakizay.
Efa ela no noheverina ho iray amin'ireo zava-mahatalanjona eto amin'izao tontolo izao. Niagara Falls dia malaza amin'ny fisintonana ireo volan-tantely. Na izany aza, tsy mila manambady vao tsy ela akory ianao vao hankasitraka ny halehiben'ity riandrano ity! Ny fahitana fotsiny dia manaitra, fa ny fidradradradrana dia zavatra tsy hohadinoinao mihitsy. Ny sary lavitra dia mety hahazoana sary tsara tarehy, saingy mety tsy tokony hanandrana hanakaiky loatra amin'ny zavatra elektronika ianao. Raha ny marina, raha manapa-kevitra ny hanakaiky ianao, dia alao antoka fa mitondra poncho sy akanjo miova ianao! Rehefa avy maina ianao dia hahatsapa ho matanjaka kokoa noho ny kanto sy ny voninahitra.
Safidy tsara indrindra ho an'ny mpianatra eropeana, nahagaga ny olona nandritra ny taonjato maro ity fahagagana irlandey ity. Ny angano dia nilaza fa izy io dia namboarina ho làlana ho an'ny Giants mba hahatratra an'i Ekosy na dia tena mahatalanjona aza ny tena tantaran'ny fipoahan'ny volkano. Ny fahitana ireo tsanganana basalt mijoalajoala (Misy 40,000 XNUMX amin'izy ireo!) Dia ampy hamela fofonaina rehetra. Hahatsiaro ho gaga sy hanetry tena ianao, fa vonona ny hamaky amin'ny boky indray, taorian'ny fitsidihana ny sehatra maharitra amin'ity fipoahana volkano ity.
Indraindray, mila miala kely fotsiny ianao. Ny fitaomam-panahy dia ampahany lehibe amin'ny dingan'ny fianarana, ary indraindray, mila mitady izany ianao. Ireo toerana eto amin'ity lisitra ity dia tsara sy manome aingam-panahy amin'ny lafiny maro. Azo antoka fa hanala anao amin'ny zavatra rehetra hitanao izy ireo.